बालबालिकालाई काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट जोगाउनुपर्छ | Investopaper
बालबालिकालाई काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट जोगाउनुपर्छ
काठमाडौंँ । बालबालिकालाई कोरोना भाइरसले खासै असर गर्दैन, सङ्क्रमण भइहाले पनि चाँडै निको भइहाल्छ भन्ने सोचाइ र बुझाइ धेरैको छ । तर, यो सोचले गम्भीर स्थिति पु-याउन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ । कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी समस्यामा पार्न सक्छ भन्ने आइरहँदा बालबालिकालाई महामारीबाट जोगाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
धुलिखेल अस्पतालका नर्स मनिता कर्माचार्यकी छ वर्षीया छोरीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि निकै गाह्रो भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘साना बालबालिकालाई कोरोनाले गाह्रो हँुदैन भन्ने मेरो पनि सोचाइ थियो । तर, मेरो सोचाइ गलत रहेछ । भोगेपछि थाहा भयो । छोरीलाई बचाउन धेरै कठिन भयो ।’’ सबै परिवारका सदस्य कोरोना सङ्क्रमित भएपछि छोरीलाई पनि सातौँ दिनमा परीक्षण गराएँ ।
उहाँका अनुसार छोरीलाई समेत पोजेटिभ आयो तर खासै लक्षण नदेखिएकाले चिन्ता लागेको थिएन । सङ्क्रमित भएको रिपोर्ट आएपछि छोरीलाई पेट दुख्ने, पातलो दिसा लाग्ने, खान रुचि नहुने, बान्ता हुनेजस्ता समस्याले हैरान बनायो । कर्माचार्यले भन्नुयभो, ‘‘कोरोनाले बालक, वृद्ध कसैलाई पनि छोड्दैन । त्यसैले वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण काम हो ।’’
बालबालिकाको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९२ प्रतिशतभन्दा कम भएमा पूरा वाक्य बोल्नसमेत नसक्ने जिब्रो, ओठ, कानको लोती, औँलाका टुप्पा नीलो हुने समस्या देखिन सक्छ । सामान्य लक्षण देखिएको अवस्थामै बालबालिका वा किशोरकिशोरीमा कोरोना भाइरसको परीक्षण वा एन्टिबडी परीक्षण गर्नुपर्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. जुन डङ्गोलको सुझाव छ ।
उहाँका अनुसार बालबालिकाको उपचारका लागि संरचनागत स्रोत, साधनदेखि विज्ञ जनशक्ति अभाव छ । त्यसैले यो परिस्थितिमा सावधान रही बालबालिकालाई सङ्क्रमण हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । डा. डङ्गोलले भन्नुभयो, ‘‘सङ्क्रमण भएको छ भने शारीरिक रूपमा गलेका बालबालिकालाई मानसिक तनाव हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।
← राष्ट्रव्यापी वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना हुँदै
तीजकाे नयाँ गीत ‘जम्काभेट’ सार्वजनिक (भिडियाेसहित) →